Lavazza Tiny Espresso Muchina - Dhizaini magazini
Espresso Muchina A mashoma, ane ushamwari espresso muchina unounza wechokwadi Italian kofi ruzivo kumba kwako. Dhizaini iyi inofara nemahombekombe- anoumbwa nezvivakwa zvekuvakisa - anovara makara uye anoshandisa mutauro waLavazza mukutarisa uye kutsikisa. Iyo huru shell inogadzirwa kubva kuchinhu chimwe uye ine zvinyoro zvinyoro zvinyoro zvinodzora. Iyo yepakati crest inowedzera inoonekwa chimiro uye yekumberi maitiro inodzokorora yakatsemuka tema inowanzo kuvapo pane zvigadzirwa zveLavazza.
Zita rechirongwa : Lavazza Tiny, Vagadziri zita : Florian Seidl, Izita remutengi : Lavazza.
Espresso Muchina Florian Seidl Lavazza Tiny